DataNumen: Ubulungu bezinhlangano zamazwe omhlaba
Ikhaya Ubulungu bezinhlangano zamazwe omhlaba
Ubulungu bezinhlangano zamazwe omhlaba
DataNumen unaka kakhulu ukushintshana nokubambisana kwamazwe omhlaba. Inobulungu obuningi nokusebenzisana nezinhlangano ezibalulekile zikazwelonke nezamazwe omhlaba. Sigcina ukuxhumana okusondele kakhulukazi nezikhungo ezibhalwe lapha, kepha DataNumen iyasebenza futhi kwezinye izinhlelo eziningi nobambiswano ezindaweni zesoftware, ezejwayelekile, ezokuzibandakanya kwezemvelo nezenhlalo.
Isoftware Nenhlangano Yezimboni Zolwazi
I-Software & Information Industry Association ingenye ye-most izinhlangano ezibalulekile zokuhweba zesoftware nezimboni zokuqukethwe kwedijithali. I-SIIA ihlinzeka ngezinsizakalo zomhlaba wonke kubudlelwano bukahulumeni, ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, imfundo yezinkampani kanye nokuvikelwa kwempahla yomqondo ezinkampanini eziholayo.
Inhlangano Yabathengisi Besoftware Ezimele
I-Organisation of Independent Software Vendors (i-OISV) iyinhlangano yokubambisana yabathuthukisi be-software, abathengisi, abasabalalisi, kanye nabathengisi abahlanganisa imicabango nemibono yabo ukwenza amasoftware nemikhuba engcono yawo wonke umuntu. I-OISV isuselwa kumagugu wokulingana, intando yeningi, ukwethembeka, ubumbano nokusiza abanye ukufeza izinhloso zabo.
Ochwepheshe Bemboni Yesoftware
Ochwepheshe Bemboni Yesoftware bangelinye lamaqembu amakhulu emhlabeni amele amalungu omkhakha wesoftware, anamalungu angaphezu kwama-2400 emazweni angama-93.
I-Association of Independent Software Industry Professionals
I-AISIP yinhlangano yobungcweti yabantu abasebenza embonini ye-software ezimele. UMost Amalungu e-AISIP athengisa isoftware nezinsizakalo kumawebhusayithi awo, futhi alwela ukunikela ngemikhiqizo ebalulekile, enenzuzo ngenkathi enza imali.
Ukubambisana Kwesoftware Yezemfundo
I-ESC (Educational Software Cooperative) iyinhlangano engenzi nzuzo ehlanganisa ndawonye onjiniyela, abashicileli, abasabalalisi kanye nabasebenzisi be-software yezemfundo.
I-International Professional Data Recovery Association
I-IPDRA (International Professional Data Recovery Association) isethelwe ukusiza izinhlangano nabantu ababekade bena-lost idatha ngokubakhomba enkampanini Yokuthola Idatha efanelekayo, enolwazi futhi eqinisekisiwe.